IVirgo-Libra Cusp: Intliziyo entle kunye nengqondo - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Iimpawu Nobuntu
IVirgo-Libra Cusp: Intliziyo entle kunye nengqondo
I-Virgo-Libra cusp yi 'Cusp yoBuhle.' Abantu abazelwe kule cusp banobubele, bathobekile, banesisa, bayathandeka, banesidima kwaye baqeqeshwe. Ziqulathe ubukho besitayile kwaye zihlala zidibana zingenasiphako. Ngokusemandleni abo, iVirgo-Libra ingangumzekelo wazo zonke izinto ezilungileyo nezithandekayo nezinqwenelekayo.
Imihla yeVirgo-Libra Cusp
Nangona imihla iyahluka, ukuba usuku lwakho lokuzalwa luphakathi kukaSeptemba 21 noSeptemba 23, usenokuba wazalwa kwi-Virgo-Libra cusp. Nangona kunjalo, ngenxa yokutshintsha kwelanga kwiintsuku ezahlukeneyo kunye namaxesha ngonyaka, kuyakufuneka ukuba ube nexesha lokuzalwa elibaliselwe ukwazi ngokuqinisekileyo. Ukuba ilanga kwitshathi yakho yokuzalwa li-27, 28, okanye i-29 degrees zeVirgo, wazalelwa kwi-Virgo-Libra cusp.
Indlela uLu-Virgo Cusp Sign elawula ngayo uBomi noThando
Abantu abadumileyo beLibra
Umhlaza-uLeo Cusp: Ukuphonononga umqondiso kunye neempawu zawo ezizodwa
IVirgo-Libra yoBuntu oBalulekileyo
Amazwi amadala 'ubuhle bunje ngobuhle' kwaye 'ukugqibelela emehlweni ombonayo' kufanelekile kubuntu beVirgo-Libra cusp. I-Virgos ezalwe kwi-cusp yeLibra ayinazintloni kwaye inentlalontle, ayigcinwanga kangako, kwaye ivuleke ngakumbi kuneVirgo eqhelekileyo. Zizinto ezinokwenzeka ezinengqondo ebukhali kunye neetalente zobugcisa eziqaqanjisiweyo ngokufunda, ukusebenza nzima, ubuchule kunye nobuchule. Unxibelelwano, idiploma, kunye nemvakalelo yangaphakathi yobuhle kunye nomtsalane ziimpawu eziphambili zobuntu be-Virgo-Libra.
IVirgo kunye neLibra
IVirgo, uphawu oluguqukayo loMhlabailawulwa yiMercury, yeyona nto ifezekileyo ye-zodiac.ILibra, uphawu lweKhadinali yomoyailawulwa nguVenus, luphawu lwe-zodiac lokulingana kunye nemvisiswano. IVirgo, exhaswa yiLibra, idala abantu abazabalazela ukugqibelela kokucinga kuko konke abakucingayo, abakwenzayo, kwaye bathi. Nangona kunjalo, ukungqubana kwabo kwangaphakathi phakathi kokufikelela kwimfezeko kunye nokugcina izinto zilungelelene kunokudala umntu othukileyo, onomsindo, ogxekayo, kwaye ongahlali onelisekile.
Imercury ilawula zombini iGemini kunye neVirgo. Njengoko tumlawuli weVirgo, iMercuryibeka iVirgo-Libra ngengqiqo kunye nolwazi olusebenzayo. UVenus ulawula zombini iTaurus kunye neLibra. NjengokoUmlawuli weLibra, uVenusibanika ubukrelekrele, imvo yokulingana kunye nobulungisa, kunye nomnqweno wobudlelwane obumnandi, obuhambelanayo.
UVenus kwiiGuises zakhe ezimbini
Nangona kunjalo, i-Virgo-Libra cusp ikwiIsigqibo seTaurus seVirgo, elawulwa yiVenus encinci yobukrelekrele kunye ne-hedonistic yokuzithanda, evuselela inkanuko yothando kunye nokuthanda izinto eziphathekayo. IMercury, exhaswa nguVenus, kuzo zombini iziqu zayo, ivelisa iiVirgos ezisebenzisa imali kwaye zikrelekrele emhlabeni. IVirgo-Libras bayinyani ngokwenyani ngoxabiso olunzulu ngobomi abafuna impumelelo, ukuchuma, kunye nentabalala kumanqanaba amaninzi.
Ukuhambelana kweVirgo-Libra Cusp
IVirgo-Libra inokufumana umdlalo wabo ogqibeleleyoTaurus evuselela inkanuko. I-Taurus, uphawu lwe-Earth Fixed lwe-zodiac, lunokuzinzisa imeko yabo yokukhathazeka. Kodwa okubaluleke ngakumbi kwiVirgo-Libra, iTaurus yintando yothando ethanda 'ubomi obulungileyo' kwaye izimisele ukulinda de yonke into igqibelele xa kufikwa kwimicimbi yentliziyo.
Abantu abadumileyo beVirgo-Libra
Umzekelo obalaseleyo womntu odumileyo ozelwe kwiVusgo-Libra cusp nguAndrea Bocelli. Wazalelwa ngoSeptemba 22, 1958, ilanga lakhe likwi-28 ° 40 'Virgo. UBocelli uthi Ibali lakhe liyangqina ukuba akukho phupha lingenakwenzeka. Into ebalulekileyo kukukholelwa kuyo, kwaye ulandele iprojekthi yakho yobomi ngokunyaniseka, ngentobeko, nangokuziphatha. ' NjengoBocelli, ezinye ii-cusper ezidumileyo zeVirgo-Libra zisebenze nzima kwaye zafezekisa amandla abo okunxibelelana ngobuchule nangobugcisa.
URay Charles: Nge-23 kaSeptemba 1930, ngeLanga nge-29 ° 58 'kwiVirgo
UJoan Jet: Nge-22 kaSeptemba 1958, ngeLanga nge-29 ° 18 'ngeVirgo
USteven King: ngoSeptemba 21, 1947, ngeLanga 27 ° 24 'Virgo
UBill Murray: Septemba 21, 1950, Ilanga 28 ° 11 'Virgo
Ayizizo zonke izazi ngeenkwenkwezi ezijonga ukuba i-cusps ibalulekile, kwaye abanye bakholelwa ukuba iLanga likwimigangatho emithathu yokuqala yomqondiso, isekukhanyeni. Nangona kunjalo, ukuqonda kwe-Decans yeenkwenkwezi, kutyhila ukuba kutheni ukuzalwa xa iLanga ekuqalekeni kweLibra kwahluke kakhulu. Ingcamango yeenkwenkwezi zeenkwenkwezi zihambelanaukuqhubela phambili kwelanga, eqhubela phambili kwitshathi yokuzalwa isidanga esinye ngonyaka. Oku kuthetha ukuba kwasekuqaleni ebomini babo (i-0 ukuya kwi-3-iminyaka ubudala), la maxesha eVirgos aqala ukudibanisa ezinye zeempawu zeLibra kubuntu babo beVirgo.
Malunga Iincwadi Zabantwana Ukukhulelwa Nokusebenza Iitattoo Izixhobo E Izixhobo Ishishini Impahla Yamadoda Ihybrid Vehicles
uhlala uhamba nenja yakho
amagama amakhwenkwe ebhayibhile aqala ngo-j
Apho ukunikela ngamakhadi akudala ekrisimesi
ukupeyinta njani ezandleni
zeziphi izinto ezifanelekileyo ukusebenza
xa umfazi webra egqibile ngawe